Izizathu ezi-7 zokuFezekisa ukuKhangelwa kweFowuni kunye noHlahlelo | Martech Zone
Izizathu ezi-7 zokuPhumeza ukuKhangelwa kweFowuni kunye noHlahlelo
NgoLwesithathu, Meyi 20, 2015 NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2021 Douglas Karr
Undwendwe lufumana indawo yakho lisebenzisa igama eliphambili kwishishini lakho. Bafika kwiphepha lakho lasekhaya nge-smartphone yabo, vula iphepha lasekhaya, kwaye ufumane inombolo yakho yefowuni ngokukhawuleza. Inkqubo ye- inani lidityaniswe ngokufanelekileyo ukufowunela ngokuzenzekelayo xa becofa inombolo yefowuni. Ithemba lithetha neqela lakho elinetalente elingena ngaphakathi livale ngokukhawuleza.
Ngelishwa, ayizondaba zimnandi ezo. Inombolo yakho yefowuni ngu ikhowudi enzima Kwitemplate yakho yewebhu. Ngenxa yoko, awazi ukuba undwendwe luvela phi kwaye leliphi iphulo, ukuba likho, lokuthengisa ngentengiso evaliweyo. Ukuba ubusiphumeze isisombululo sokulandela umkhondo, ubunokuba nebali elahlukileyo kakhulu. Umsebenzisi ngewayefike kwindawo yakho kwaye inombolo entsha yefowuni yayiya kwenziwa ngamandla ngokusekwe kwigama eliphambili kwiphulo lokukhangela. Umntu ngewayifowunele loo nombolo, umnxeba ngewa ubhalisiwe emnxebeni kubahlalutyi, kwaye ukuthengisa bekuya kubalelwa ngokufanelekileyo kwigama elingundoqo kunye nephulo lokukhangela.
Ngelixa le yayiyinto yokonwaba ngokuzithandela kumashishini amashishini kwiminyaka eyadlulayo, ukulandelela umnxeba kunye kubahlalutyi Ngoku zizisombululo ezifikelelekayo. Yongeza iindleko ngokuziphatha kwe-smartphone- okunyuka ngokunyuka- kwaye lixesha lokuba usebenzise le teknoloji! Awundikholelwa? Nazi izibalo ezi-7 ezibalulekileyo ezixhasa ukwamkelwa kokulandelwa komnxeba:
Ukukhula kokhangelo lweselfowuni Kulindeleke ukuba ivelise iifowuni ezingama-73 yezigidi kumashishini ngo-2018
I-61% yabaphenduli bophando bathi cofa-ukubiza umnxeba sisitshixo kwinqanaba lokuthenga lokuthenga
I-70% yabaphandi beselfowuni basebenzise ukucofa-ukunxibelelana ukunxibelelana neshishini ngokuthe ngqo ukusuka imiphumela
I-79% yabasebenzisi be-smartphone bayayisebenzisa ukukhangela kwendawo, Iipesenti ezingama-89 kanye ngeveki, iipesenti ezingama-58 ubuncinci yonke imihla
I-57% yabantu bayatsalela umnxeba kuba befuna ukuthetha no umntu wokwenene
Amashishini afumene i-19% ukunyuka kwevolumu yokufowuna unyaka ngaphezulu konyaka
Ezingenayo umnxeba uguqula Amaxesha ali-10-15 ngaphezulu kokukhokelwa yiwebhu
As IfowuniRail ibeka, amathemba akho sele efowunini. Umbuzo ngowokuba bayakubiza okanye abayilandeleli.
Ukubhengezwa: Ndililungu le IfowuniRail
tags: Ukulandelela umkhondo kohlalutyohlala uhlalutyoumnxeba kaloliweukulandelela umnxebaumnxeba
Ukuthengisa umxholo ngumlinganiso weKharityhulam kunye neNdalo
Jan 4, 2016 kwi-11: 38 AM
Emva kokufunda eli nqaku yonke into iya icace :) Enkosi ngenqaku.Izibalo ziyamangalisa, kwaye nangona ungazi nto malunga nokulandelwa kweefowuni, kukwenza ucinge ngeenzuzo zayo. I-Callrail ibonakala iyisigqibo esihle, kwaye kukho abanye ababoneleli abafana ne-Avidtrack, i-Ringostat, i-Dialogtech.